शनिबारदेखि सर्तसहित खुल्नेछ कास्की, सवारीमा जोर-विजोर लागू हुने, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? – Tandav News
शनिबारदेखि सर्तसहित खुल्नेछ कास्की, सवारीमा जोर-विजोर लागू हुने, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७७ भाद्र १२ गते शुक्रबार १७:०३ मा प्रकाशित
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले भोलि शनिबारदेखि निषेधाज्ञा खुकुलाे गराउने भएकाे छ । प्रशासनले आज १२ बजे रातिदेखि भाद्र २० गतेसम्म लागू हुनेगरि विभिन्न सर्तसहित निषेधाज्ञा खुकुलाे गराउने भएकाे हाे ।
प्रशासनल कार्यालयले सुरक्षा मापदण्डको पुर्ण पालना गर्न जिल्लावासीहरुलाई अनुरोध गरेको छ । मानिसहरु भेला जम्मा हुने, भीडभाड, सभा, जुलुस जस्ता कार्य नगर्न र विद्यालय क्याम्पस लगायत खेलकुदस्थल, शैलुन, जिमखाना लगायतका संस्था सञ्चालन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
प्रशासनले जिल्लामा जोर दिनमा जोर नम्बरका सवारी र बिजोर दिनमा बिजोर नम्बरका सवारी बिहान ६ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने जनाएको छ । यस्तै, रेष्टूरेण्टहरुले साँझ ७ बजेसम्म टेक-अवे सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
हेर्नुहोस् के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
तालबाराही स्कुल : ३८ वर्षमा ४ रोपनी ६ आना जग्गा गायब !
ह्याचरी उद्योग सङ्कटमा, १० दिनसम्म चल्ला उत्पादन बन्द
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ : नेता पौडेल
एपिएफ १४ वर्षपछि ‘आहा ! रारा गोल्डकप’को फाइनलमा
अख्तियारद्वारा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ बिरुद्ध मुद्दा दायर
कोभिड अपडेटः ८४५४ संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित संख्या ९० हजार नाघ्यो